Izinyathelo zokuqapha ukufakwa kwentambo yekhamera yokuqapha - I-Connexions Technology (Dong Guan) Ltd.
Ukuqapha kokufaka izintambo zekhamera yokubhekwa
1. I-CCTVIvidiyoCuyakwazi: ikhebula levidiyo le-SYV75-3 ngokuvamile lihambisa ngaphakathi kwamamitha ayi-200, ama-75-5 adlulisa ngaphakathi kwamamitha ayi-400, ama-75-7 angadlulisa amamitha ayi-800; ikhwalithi ye-I-CCTVCikhebula le-oaxial, RG59, RG6, kufanele inakwe. Kokubili i-RG11 ne-RG11 kudinga ingqimba yethusi engu-100% no-95% wendwangu yokuvikela ithusi. Ukumelana okuphezulu kokuxhumeka kwe-loop yesifunda akukwazi ukudlula ama-ohms ayi-15. Lapho ibanga lidlula amamitha ayi-500, kuyadingeka ukuthi ucabangele ukusetshenziswa kokudluliswa kwekhebula elibonakalayo.
2. Intambo kagesi: Kufanele kukhethwe izintambo ezivutha amalangabi, futhi eziqinile kufanele zisetshenziswe ngangokunokwenzeka ukunciphisa ukuncipha kwamandla kagesi.
Umugqa wokulawula: ngokuvamile sebenzisa ikhebula le-2 * 1.0 elivikelwe, i-RVVP2 * 1.0.
Ukuchusha kwepayipi: Ipayipi le-PVC noma i-PVC trunking ingasetshenziswa ngokujwayelekile, futhi ipayipi lensimbi lashukumisa kufanele lisetshenziselwe amaphrojekthi angaphansi komhlaba noma wokuqhuma.
Xhumana nathi ngekhwalithi ephezuluI-CCTVCikhebula le-oaxial, RG59, RG6.
Ungayithola kanjani i-intanethi engcono kwi-motorhome yakho?
Yini okufanele siyinake lapho sifaka ama-Solar Panels?